Global Voices teny Malagasy » Kiobà: Maty Tao Amin’ny Fonjan’i Havana Ilay Gadra Politika Nitokona Tsy Nihinan-kanina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Avrily 2018 17:27 GMT 1	 · Mpanoratra Susannah Vila Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Kiobà, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifindràmonina, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona
(Marihina fa tamin'ny 25 Febroary 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Sady niteraka fahanginana no niteraka fahatezerana antserasera ny fahafatesan'ilay gadra politika Kiobàna voalohany hatramin'ny taona 1972 maty tamin'ny fitokonana tsy nihinan-kanina.
Ho fanehoan-kevitra momba izany, namoaka andianà sary mainty, nifanesinesy, fa tsy nisy soratra i Orlando Luis Pardo  avy ao amin'ny Boring Home Utopics . Nandefa  lahatsary iray nataony ho an'ny renin'ilay voafonja niandry teo ivelan'ny hopitaly izay nahafatesan'ny zanany lahy i Yoani Sanchez. Niantso ny fahafatesan'ny zanany ho “famonoana niniana natao i Reina Luisa Tamayo ao anatin'izany”. Nahatsapa toy izany  ihany koa ireo hafa. “Niverina amin'ny Famonoan'olona ry Castro Mirahalahy!!!!” hoy ny lohatenin'ny lahatsoratra navoakan'i El Tono De Voz  izay voaresaka betsaka tao amin'ny Twitter .
Nanomboka ny faha 86 andron'ny fitokonany tsy nihinan-kanina i Orlando Zapato Tamayo ny 3 Desambra 2009, taorian'ny fidahorhan'ny mpiambina fonja iray azy mafy loatra tany amin'ny faritany atsinanan'i Holguin ka nahatonga ny fandidiana ny lohany noho ny rà niandrona vokatr'izany. Tamin'ny voalohany, nandà ny fanomezana rano azy nandritra ny 18 andro ny lehiben'ny fonja, ka nahatonga ny tsy fiasan'ny voany ara-dalana. Rehefa nafindra toerana indray izy, dia niharan'ny areti-tratra (pneumonia). Tao amin'ny fonjam-piarovana avolenta indrindra tao Havana izay nahafatesany ny famindrana toerana azy farany.
Hoy ny Along the Malecon  raha nanoratra: “Nanatevin-daharana ireo mpanohitra izay nanao fitokonana tsy nihinan-kanina izy tamin'ny taona 2003 mba hanerena ny governemanta sosialista hamotsotra ireo gadra. Saingy maro tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana ireo no nogadraina am-ponja taty aoriana.”
Herintaona taorian'izay, voasazy higadra 3 taona an-tranomaizina ho nanao faniratsirana ny fitsarana, ny fanankorontanana saim-bahoaka ary ny tsy fankatoavana i Zapato Tamayo. Rehefa tany am-ponja izy, nohalavaina ho 36 taona ny saziny noho ny “fihetsika tsy fankatoavana.”
Ilay gadra politika teo aloha Jorge Luis García Pérez  , araka ny tatitry ny Radio y Television Martí , dia nilaza fa “niteraka hakiviana goavana manerana ny firenena, tsy teo amin'ireo mpanohitra ihany fa teo amin'ny vahoaka iray manontolo ihany koa” ity trangan-javatra ity.
Toa maniry ny hanampy ny faminanian'i García Pérez mba ho tanteraka ireo bilaogera sasany. Araka ny nosoratan'ny Uncommon Sense  hoe “tsy fotoanan'ny fanenenana izao fa fotoana hanaovana hetsika, mba hanarahana ny ohatra nasehon'i Zapata ary hanohizana ny tolona manohitra ireo izay namono azy sy ho amin'ny fahafahan'ny Kiobana”. Hoy ny mpaneho hevitra iray tao amin'ny Diario de Cuba  raha nanoratra toy izao :
“Tandremo fa mikarakara diabe maneran-tany izahay amin'ny 13 Martsa 2010 ho an'ny fanafahana ireo gadra politika Kiobana, sy mba hanatanterahana ny fanasaziana ireo tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'i Orlando Zapata Tamayo ihany koa .”
Nahitana fanavaozam-baovao momba ity hetsika ity ihany koa tao amin'ny Twitter . Nanolo-kevitra ny hanaovana rojom-bavaka  (virtoaly) nandritra ny maraina nandevenana an'i Zapata Tamayo ilay bilaogera Yoani Sanchez .
Etsy ankilany, ny mpiandany amin'ny fitondrana, Cuba Debate  (izay manana kaonty Twitter  ihany koa ), namoaka indray ny lahatsoratra iray tao amin'ny La Isla Desconocida :
Manan-jo izy ireo hilaza fa vonoan'olona izany… saingy manafina ny tena mpamono olona ny fampitam-baovao : ireo vondrona Kiobana kely sy ireo mpanolontsaina iraisam-pirenena. Novonoin'ny mpanohitra ny revolisiona i Zapata .
Hita tao amin'ny aterineto ihany koa ny antokon'ny fitondrana, noho izany.
Araka an'i Daniel Vottio , mpitati-baovao CNN teny espaniola dia nisy ny mpiambina nanodidina ny tranon'i Tamayo nanaovana ny fiandrasam-paty. Nisioka i Sanchez fa nosakanana tsy hiala ny tranony ireo mpanohitra; toa nosakanana tsy hihetsika ny tenany sy ireo hafa.
Nogadraina ary tratran'ny tsy fahasalamana ihany koa ireo gadra Kiobana mpaneho hevitra roa hafa , Ariel Sigler Amaya  sy Normando Hernández González  . Mbola tsy fantatra izay hitranga amin'izy ireo, sy ho an'ny fiarahamonim-pirenena Kiobana?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/15/117453/
 Nahatsapa toy izany: http://search.twitter.com/search?q=castro+matar
 -kevitra ny hanaovana rojom-bavaka: http://twitter.com/yoanisanchez/status/9597364405